ငယ်ရုပ်မပျောက် နုနုပျိုလှပနေဆဲဖြစ်တဲ့" ပပဝင်းခင် "ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ | 9han News
Admin | June 2, 2020 | Celebrities | 1 Comment
အရုပ်မလေးလို လှပတဲ့ မင်းသမီး ပပဝင်းခင်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ဗီဒီယိုခေတ်ရဲ့ မင်းသမီးအခန်းတွေမှာ ပါဝင်ပြီး ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်.။ Music ဗီဒီယိုတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ပြီး ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ လှလို့ ပုရိသပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲ မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်.။ လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို သိပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေမယ့် ချစ်ခင်နှစ်သက်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အားပေးနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်.။
ပပဝင်းခင်က လက်ရှိမှာ မိဘနှစ်ပါးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးရင်း သူမရဲ့ နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေသူပါ.။ အရင်အတိုင်း လှပနေဆဲ ပပဝင်းခင်ဟာ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် မပြောင်းလဲဘဲ အရင်ကထက်တောင်မှ ကြည့်ကောင်းကာ လှပေနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်.။
မေလ (၃၁)ရက်နေ့မှာတော့ ပပဝင်းခင်က မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ရိုးရှင်းစွာ သူမနှစ်သက်တဲ့ကြာပန်းလေးကို ကိုင်ထားပြီး ရိုက်ထားတဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတစ်ချို့ကို “မြန်မာဝတ်စုံကို တန်ဖိုးထားတဲ့ ကျွန်မ၊ Handmadeလေးတွေ မြတ်နိုးတဲ့ ကျွန်မ ၊ ကြာပန်းလေးတွေ ချစ်တဲ့ ကျွန်မ ၊ သိပ်လှတဲ့ကောင်းကင်ကြီးရယ်. အေးချမ်းတဲ့ ညနေခင်းလေးရယ်. ကိုယ့်အတွက် ပြည့်စုံသွားတယ်ကွယ်.။” ဆိုပြီး
သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပမယ့္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္အားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ အားေပးေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္.။
ပပဝင္းခင္က လက္ရွိမွာ မိဘႏွစ္ပါးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရင္း သူမရဲ႕ ေန႔ရက္တိုင္းကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ျဖတ္သန္းေနသူပါ.။ အရင္အတိုင္း လွပေနဆဲ ပပဝင္းခင္ဟာ မယုံႏိုင္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ မေျပာင္းလဲဘဲ အရင္ကထက္ေတာင္မွ ၾကည့္ေကာင္းကာ လွေပေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္.။
ေမလ (၃၁)ရက္ေန႔မွာေတာ့ ပပဝင္းခင္က ျမန္မာဝတ္စုံေလးနဲ႔ ႐ိုးရွင္းစြာ သူမႏွစ္သက္တဲ့ၾကာပန္းေလးကို ကိုင္ထားၿပီး ႐ိုက္ထားတဲ့ အလွပုံရိပ္ေလးတစ္ခ်ိဳ႕ကို “ျမန္မာဝတ္စုံကို တန္ဖိုးထားတဲ့ ကြၽန္မ၊ Handmadeေလးေတြ ျမတ္ႏိုးတဲ့ ကြၽန္မ ၊ ၾကာပန္းေလးေတြ ခ်စ္တဲ့ ကြၽန္မ ၊ သိပ္လွတဲ့ေကာင္းကင္ႀကီးရယ္. ေအးခ်မ္းတဲ့ ညေနခင္းေလးရယ္. ကိုယ့္အတြက္ ျပည့္စုံသြားတယ္ကြယ္.။” ဆိုၿပီး
သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္.။